Yusuf Garaad: Jawaabta Xil-ka-Qaadisteyda
Maanta oo ah Khamiis, taariikhdu ay tahay 4-ta January sannadka 2018, waxaan xalay aniga iyo Wasiiru Dowluhu ku daahnay howl uu Ra'iisal Wasaaruhu ii xil saaray in aan maanta isaga soo hor dhigo 9-ka subaxnimo si aan Golaha Wasiirrada u geyno galabta.
Shirka Golaha oo badiyaa dhici jiray 9-ka ama 10-ka subaxnimo, wuxuu Ra'iisal Wasaaruhu ii sheegay in uu galab ka dhigayo si aan annagu subaxnimada isu aragno. Hase yeeshee saaka markii aan soo toosay ayaa qof iga soo wacay dalka Mareykanku uu ii sheegay in xilka la iga qaaday.
Waxaan ku faraxsan ahay in aanan dheg u dhigin madaxda iyo dadka damcay in ay igu qalqaaliyaan in aan ku milmo arrimo aan mar iyo laba keliya ahayn oo Dowladda iyo qabiil ka dhexeeyay oo aanan labada dhan midkoodna aanan raalli ka ahayn sida ay wax ku wadaan, aniguna aan Soomaalinnimadeyda, sumcaddeyda iyo aakhiradeyda dartood aan uga dhowrsaday marka laga reebo in aan talo ka bixiyay aan la iga dhegeysan laakiin mararka qaar ay aakhirkii dani tiri.
Waxaan u mahadcelinayaa Soomaalida inta aan xilka hayay i dhiirri gelisay iyo kuwa talooyinka wanaagsan i siiyay.
Waxay u dul qaadatay in magaalada ay deggan tahay aan lix jeer ka beddesho dayaarad aniga oo aan soo dhaafin airporka.
Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa carruurteyda oo xilli qaarkood ay yihiin socod-barad aan ka maqanahay muddo aad u dheer. Kuwooda waaweynina ay goor iyo habeen ay igu dhiirri geliyaan u adeegidda dal mid toddobaad joogay maahee intooda kale aanay arag.
Waxaan taas u leeyahay waxaan ka warqabaa in aan ahay Wasiirkii tobnaad ee Arrimaha Dibadda Soomaaliya qabta ee ay wada shaqeeyaa isla hal Wasiir Arrimo Dibadeed ee dal ay wadashaqeyn dhowi naga dhexeyso. Wasiirka i beddelayaa wuxuu noqon doonaa Wasiirkii kow iyo tobnaad ee Soomaaliya matalaya ee Wasiirkaas ay is hor fariistaan.
Waxa iigu weyn ee aan ka kororsaday adeegga Qaran ee aan hayay waa in uu ii kordhay fahamka cilladda haysata Dowladnimada Soomaaliya.
Posted by Yusuf Garaad at 06:35:00